I-SMS ngoFebruwari 23 - mfutshane kunye nehlazo kunye nekratshi, ukukratyiswa kumntu oyintanda kunye nomhlobo
Okunye Ieholide Fe bruwari 23
I-SMS ngoFebruwari 23-mfutshane kunye nehlekisayo, inombulelo kumntu oyintanda kunye nomhlobo on Defender of Dayland Day
Ngamnye wabasetyhini, ngokuqinisekileyo, unomhlobo omhle okanye umntu othandekayo, ukumncoma ngoMhla woMvikeli we-Fatherland isiko elihle. Ngamanye amaxesha abahlobo bethu abasenyongweni kunye nabantu abasondeleyo baya emsebenzini, uhambo lwezorhwebo, ukuphumla. Ukuba indoda yakho ayikufuphi kuwe, kwaye iholide sele isele "ekhaleni", thumela umyalezo omfutshane, omhle wefowuni. I-SMS ehlazileyo ngoFebruwari 23 yindlela efanelekileyo yokumangalisa into emnandi kumntu "ngosuku" lwakhe. Xa ukhetha ukuvuyiswa ngeliholide, ungakulibali ukuba ivesi ekuthunyelwe ngefowuni ifanele ibe mfutshane - ngaphandle koko ayiyi kufumana kwiSMS. I-quatrains e-Funny kwi-Defender ye-Dayland Day ungacinga ngokwakho okanye ukhethe iindinyana ezipapashwe kule khasi.
I-SMS ehlekisa kumadoda eholide ngoFebruwari 23-Mfutshane ukuhalalisela kwi-Defender ye-Fatherland Day
Ukukhetha i-SMS yamadoda ngoFebhuwari umthendeleko wama-23, ungesabi ukuhleka usulu - uya kuqinisekiswa ukuqonda, ukuqonda umyalezo omfutshane wocingo. Ukuba kunokwenzeka, ungasebenzisi ukuthumela i-SMS, uthumele imiyalezo kubamkeli abaninzi ngelo xesha. Imilayezo yefowuni, ngokuqhelekileyo, ayinayo imigca emine, ngoko kulula ukulungisa iindinyana ezimnandi, ukuqala nganye i-SMS egameni lomntu. Ngomhla wamashumi amabini anesithathu ngomhla kaFebruwari, unobungqingili-jikelele! Amagxa amaninzi, iliso libukhali, Yibetha iintshaba kwaye ungabi nabubele. Ukuba akukho ukulwa okwamanje - Ekubhedeni, ndineenxa zonke!
Siyavuyiswa ngethuba lesibini kumhla wesithathu kaFebruwari! Yiba yinto epholile kuyo yonke into esiyifunayo kwaye ayiyazi iingxaki zeentsuku.
Indoda yangempela! Yamkela uvuyiswe, Uthobile isigxina Ukulinda ukutya.
Ngomhla wamashumi amabini anesithathu kaFebruwari! Ngosuku oluhle emhlabeni! Bayazi ukuba ngabantu abadala, Bazi ukuba ngabantwana!
I-SMS emfutshane iyavuyisana nabahlobo bakho ngoFebruwari 23 - imibongo ehlaziyayo kwi-Defender ye-Dayland Day
Ukususela ngoFebruwari 23, amadoda anganconywa ngabafazi kuphela. Ngokugqithiseleyo ababenokusebenza nabo basebenzisana nabo, abashiye emva kokuphela kwenkonzo kwiindawo ezahlukeneyo zaseRashiya, gcina unxibelelwano. Batshintshisa imiyalezo yomnxeba, baqhagamshelane. Ngokuqinisekileyo, kwi-Defender ye-Fatherland Day, amadoda aya kutshintshisa i-SMS emfutshane ngeengoma ezihlekisayo, kwaye mhlawumbi, thumela iposikhadi ukusuka ngoFebhuwari 23 ukuya kuma-comrades. Sinikela imizekelo embalwa yemiyalezo ehlekisayo-sivuyisana noMhla woLuntu.
I-funny funny funny SMS ukususela ngoFebruwari 23 - mfutshane funny ukuhalalisela amadoda ngomhla we Defender of Fatherland
Xa ubomi bemihla ngemihla bubonakala bunzulu kwaye, ngamanye amaxesha, bethandeka, musa ukuwashiya ithuba lokuhlekisa intliziyo kwieholide. I-SMS enhle kwaye ehlekisayo ngoFebruwari 23 iya kuphakamisa isimo sengqondo sabantu bakho abathandekayo, baphazamise ekukhathaleleni ubuncinane ngosuku olulodwa. Umyalezo omfutshane omnxeba we-Defender we-Dayland Day ungcono ukuthumela ekuseni - vumela i-SMS ehlekisayo ukuba "ihlawule" amadoda akho abathandayo kunye ne-vivacity kunye neemeko ezintle. Uze uvuyiswe ngoFebruwari 23! Unesibindi sokuzukisa entliziyweni Ndiyathanda! Uhlala ufana, Wonke umzekelo-omhle! Uze uphumelele, kwaye yonke into iya kulungiswa!
NgoFebruwari 23 ngumhla wokukhusela, kwaye siyakuvuyisana nani madoda, Yiba namandla njengeengonyama, Kuba uncedo, kwaye sifuna.
Ndi nqwenela nina baxhasi, ukuba nizele amandla! Ukuze uvuyo lube nawe, Ngoko ukuba ishishini lihlala linenhlanhla!
Vumela iholide yakho ayilungile, Njengowesifazane ngomhla we-8 kuMatshi. Kodwa uncoma ukuba ungathethi, kwaye uthando olo luyavuya.
I-SMS ehlekisayo kunye neeholide yomhlobo kaFebruwari 23 - Imiyalezo emfutshane kunye namahlaya kubahlobo kwi-Defender ye-Fatherland Day
NgoFebruwari 23, ngokukhethekileyo kusasa, thumela abahlobo bakho befowuni imilayezo yomnxeba-mncoma. Ungakwazi ukuza ngeSMS yakho emfutshane ngokwakho okanye usetyenzise kakade ibhaliwe kwaye ishicilelwe kwiivesi zethu ezincinane. Zama ukuhlala uvuyayo entliziyweni, kodwa bekungabonakali kakhulu, beyinyameko. Ngokuqinisekileyo, ukuthumela i-SMS ngokuhlekisayo kwi-Dayland Defender's Day kumngane, bonisa ubulumko kwaye ungakhubekisi umngane wakho ngokungazi. Usuku loKhuseli olungileyo, buddy! Iintsuku ezikhanyayo Ndiyathanda inkulungwane, Nempilo, kwaye ilungile. Kwaye ndiyamemeza kuwe: "Hooray!". Ukususela ngo-23 kaFebhuwari! Kwaye makube sekukuphela kweeNkca zikufihla kuzo zonke iingxaki. Vuyiswa! Iminyaka emide!
Mhlobo, namhlanje iholide yethu kwakhona! Ubhiyozelwa ngabo bonke abalimi baseRashiya. Nangona bobabili asizange sikhonze emkhosini, akusiyo isizathu sokuhamba namhlanje! Kwaye akunandaba nokuba usebenze okanye awukho, into ephambili kukuba yomelele, ndiyakwazi ukukhusela nokukhupha, Kukho naziphi na izikhwama zokuphuma.
Mhlobo, namhlanje nguFebruwari 23! Ukusuka entliziyweni ndiyathanda ukuba wenze iphupha lakho lizaliseke! Ukomelela kwakunobungqineli, uSheli uthembele phambili! Yiba ngabaqeqeshi bokuzikhusela, kwaye maye unenhlanhla
I-SMS enhle ngoFebruwari 23 isithandwa okanye intandokazi oyintandokazi-Intutshane iyancoma kwintolongo kwi-Defender ye-Dayland Day
Ukuba umhlobo wakho okanye intombi isemkhosini, thumela imilayezo emihle yefowuni malunga nendlela umthanda ngayo kwaye ulinde. NgoFebruwari 23, ungalibali ukumthumela i-SMS epholileyo kunye nemibongo -vuyisana noMlondolozi weSuku lwe-Fatherland. Namhlanje, amajoni amaninzi kwaye, ngokuqinisekileyo, amagosa, avunyelwe ukusebenzisa uxhulumaniso, ngoko ngo-Febhuwari 23 intanda yakho iya kufumana iyanconywa kwifowuni. Wena unamandla kunene, unamandla, Ulungele kum. Wena ungumkhuseli wam, ndikholelwa kuyo Ngomhla wamashumi amabini anesithathu kaFebruwari. Kwaye ngenxa yenu ndiyathanda kuzo zonke iimpumelelo nokuphumelela. Ndiyintliziyo yonke, ndivuma ngokungqongqo, Kuphela ukunyaniseka okufuna ukubuyisela.
Umhla ubaluleke kakhulu namhlanje, lixesha lokumakisha. Ndiyamthanda, ndivuyisela ngoFebruwari 23! Makuvumeleke ukunika uvuyo oluninzi, ukufudumala, Ngaphandle kwenkxaso ayiyi kushiya Inhlanhla kwishishini. Vumela phantsi kwezulu ecacileyo ukuba uhlekisiwe ukuhleka. Umlomo wakho unomlomo ondizondayo ndiya kumanga kanzima.
Ndithandwa, ndiyavuyisana. Vumela uSuku loMkhuseli avelise uvuyo. Ndiyathanda ukuba uvumelane, Ndiyathanda ukuba unonwabo, Yenza zonke izinto ezimbi zidlule kuwe. Ukuphumelela kuwe kunye nempumelelo enkulu, Umsebenzi wakho wodwa uvumele uhambe. Yiba yindoda ekhohlakeleyo, eyonwabileyo kwaye inyanisekileyo. Vumela amaxhala ahambe, kwaye ukuchuma kukhula!
Usebenza namhlanje, Ifom isondela kangaka! Yaye makube nzima ukusebenza, uMlawuli akayi kunika. Ngomhla womkhuseli we-Motherland Wish ukwamukela iiminqweno - Uqhayiya ukuba uphumelele ebomini, kwaye lukhulu, uthando olukhulu, Ukuze wenze impumelelo ngokukhawuleza.Angazange adlulise i-plaade's parade. Ewe, ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ngeliholide asikwazi ukuvuyisana nomntu othandekayo okanye ngumhlobo ngokwakhe. Iifowuni ezimfutshane ziza kuhlangula. I-SMS yakho ehlekisayo ngeFebruwari 23 iya kufinyelela naphi na kwihlabathi ize ifumane indoda, naphi na apho. Ukuba umntu wakho usebenza emkhosini, qha ga mshelana naye kwi Defender of Dayland Day, umthumelele i-SMS ehlekisayo kunye neentlonelo kunye namazwi okuncoma. Jabulela owathandayo - ulindele iindaba kuwe kuwe yonke imihla!
Ilungelo ngokusemthethweni ngoFebruwari 23: indlela yokuvuyisana nomphathi kunye nabo
Imifanekiso yoFebhuwari 23, 2018 - ehlekisayo, ehlekisayo kwaye enhle
Iimfesane ngomhla we-23 kuFebruwari kubafundi besikolo, abantwana abafana esikolweni kunye namadoda amakhulu
Makuvuyiswa ngoFebruwari 23, 2018 kubabawo, oogxa, amadoda: kwivesi, prose, sms
Imiba ngeFebhuwari 23: mfutshane kunye nexesha elide kubantwana nakumadoda - I-SMS ehlekisayo kunye nehlekisayo iyavuyisana. Imibongo emfutshane kaFebhuwari 23 ngamakhwenkwe amantombazana esikolweni nasezikhunjini
Ukunciphisa ubunzima kunye nokuzonwabisa: indlela yokuba yincinci ngaphandle kokuqhathanisa nokutya
Iklasi yeyure ngomhla we-1 kuSeptemba 2016-2017 unyaka wesikolo isifundo somhlaba kwiiklasi ezahlukeneyo. Izihloko zeklasi yeyure yoLwazi lweSuku
Ukutolika kwephupha: ukuchazwa kwamaphupha anamhlanje
Ukupheka kwamadoda ukunyamekela kwamehlo
Indlela abafazi abaphatha ngayo abantu abanobubele
AmaMom ayimfuneko yonke, ama-mama ayabalulekile
Ingaba igromegranate ijusi ewusizo ekunciphiseni umzimba?
Isimo sezulu eSochi ngoMatshi 2017 - i-weather forecast evela kwi-Hydrometcenter